Ukuba ufuna naluphi na ulwazi ngakumbi okanye unemibuzo malunga nomgaqo-nkqubo wabucala, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Kwi Martech Zone, ukuba bucala kweendwendwe zethu kubaluleke kakhulu kuthi. Olu xwebhu lomgaqo-nkqubo wabucala lubonisa iintlobo zolwazi lomntu olufunyenweyo kwaye luqokelelwe Martech Zone nendlela esetyenziswa ngayo.
Njengazo nezinye iiWebhusayithi, Martech Zone isebenzisa iifayile zelog. Ulwazi ngaphakathi kweefayile zelog lubandakanya iidilesi zomgaqo-nkqubo we-intanethi (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, uMboneleli weNkonzo ye-Intanethi (ISP), isitampu somhla / ixesha, ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, kunye nenani lokucofa ukuhlalutya imeko, ukulawula indawo, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ujikeleze indawo, kwaye uqokelele ulwazi lwedemokhrasi. Iidilesi ze-IP, kunye nolunye ulwazi olunxibelelene nalo naluphi na ulwazi oluchongiweyo.
Martech Zone Usebenzisa ikuki ukugcina ulwazi malunga nezinto ezikhethwa ziindwendwe, ukurekhoda ulwazi oluthe ngqo kumsebenzisi ukuba ngawaphi amaphepha okufikelela okanye okundwendwelwa ngumsebenzisi, wenze umxholo wephepha leWebhu ngokusekwe kuhlobo lwesikhangeli sabatyeleli okanye olunye ulwazi oluthunyelwa lundwendwe ngebrawuza yabo.
UGoogle, njengomthengisi wesithathu, usebenzisa ikuki ukuhambisa iintengiso Martech Zone.
Ukusetyenziswa kweGoogle kwicookie ye-DART kuyenza ukuba isebenze kwiintengiso kubasebenzisi ngokusekwe kutyelelo lwabo Martech Zone nakwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi.
Abasebenzisi banokukhetha ukuphuma kwicookie ye-DART ngokundwendwela intengiso kaGoogle kunye nomxholo umthetho wabucala wenethiwekhi
Abanye bethu ekuthengisaneni nabo banokusebenzisa iikuki kunye neebhikhoni zewebhu kwindawo yethu. Amaqabane ethu entengiso abandakanya iGoogle Adsense, iKhomishini yeJunction, iClickbank, iAmazon kunye namanye amahlakani nabaxhasi.
Martech Zone akanakho ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies ezisetyenziswa ngabathengisi bomntu wesithathu.
Kuya kufuneka ubonisane nemigaqo-nkqubo yabucala yeeseva zentengiso zomntu wesithathu ngolwazi oluthe kratya malunga nokwenza kwabo kunye nemiyalelo malunga nokuba ungazikhetha njani iinkqubo ezithile. Martech ZoneUmgaqo-nkqubo wabucala awusebenzi, kwaye asinakho ukulawula imisebenzi, yabanye abathengisi okanye iiwebhusayithi.